Oziọma nke Ọrụ - IntegritySyndicate.com
Mbido Edemede Okwukwe Oziọma
Gịnị bụ Oziọma Ndịozi?
Ngosipụta nke nkuzi Oziọma na Ọrụ
Ikpehe 1, Ndisiak Ukwọrọikọ
Nkebi nke 2, ụbọchị Pentikọst
Ikpehe 3, Peter ọkwọrọ ikọ ọnọ mme Jew
Nkeji 4, Okwu Stephen
Akụkụ nke 5, Ime nkwusa na mpụga Jerusalem
Nkebi nke 6, Nchigharị Sọl (Pọl)
Nkebi nke 7, Ndị Jentaịl Na -anụ Ozi Ọma ahụ
Akụkụ nke 8, Nkwusa Ozi -ọma nke Pọl
Akụkụ 9, Kansụl Jerusalem
Ikpehe 10, Utom Paul
Oziọma Ọlụ Ndị Ozi bụ Oziọma Jizọs Kraịst dịka akwụkwọ Ọrụ Ndịozi siri kwuo. Nke ahụ bụ, Oziọma ahụ ka ndị ozi kuziri ma kwusaa ka ha na -aga n'ụwa. Ọ bụ Luk dere Oziọma Luk na Ọrụ Ndịozi bụ onye dere na mbido, "N'akwụkwọ mbụ m O Theophilus (nke pụtara onye na-achọ Chineke), emeela m ihe niile Jizọs malitere ime na nkuzi, ruo mgbe otu ụbọchị mgbe e buliri ya elu, mgbe o nyechara ndị mmụọ ozi iwu site na Mmụọ Nsọ. ” (Ọrụ 1: 1-2) Ọrụ dị oke mkpa ebe ọ na-amalite ebe Oziọma Luk kwụsịrị na nrigo Kraịst.
Mgbe anyị na -ewepụta nkuzi, ikwusa ozi ọma na agbamume n'akwụkwọ Ọrụ Ndịozi, anyị na -ahụ nke ọma Oziọma nke ndị ozi kwenyere ma kuzie. Nke mbụ, a na -enye nkọwa nke ozizi ntọala. Mgbe ahụ anyị na -amalite site n'amaokwu ole na ole n'isiakwụkwọ ikpe -azụ na Luk wee banye n'ime ịgba ama nke ndị ozi. Ka anyị hụ ihe ndị Kraịst nyere ọrụ chere na Oziọma gbasara ka anyị na -ahụ akaebe nke ndị ozi ebe Kraịst họpụtara. Amaokwu ndị dị mkpa dị na Bekee Standard Version (ESV) belụsọ na edepụtara ya n'ụzọ ọzọ.
E depụtara ndepụta nke ozizi ndị bụ isi nke Ọrụ Ndịozi gbara n'okpuru. Nke a kwekọrọ na Ndị Hibru 6: 1-8 nke na-akọwapụta nkuzi nke ntọala.
1. Mmalite: (nkuzi izizi) nke Kraịst
Ọrụ 1: 3, Ọrụ 2: 22-36, Ọrụ 3: 13-15, 18-26, Ọrụ 4: 10-12. Ọrụ 4: 24-31, Ọrụ 5: 30-32, Ọrụ 5:42, Ọrụ 7:56, Ọrụ 9: 20-22, Ọrụ 10: 36-46, Ọrụ 11:23, Ọrụ 13: 23-24, Ọrụ 13: 30-35, Ọrụ 13: 36-41, Ọrụ 17: 3, Ọrụ 17: 30-31
2. Nchegharị site n'ọrụ nwụrụ anwụ na okwukwe n'ebe Chineke nọ
Ọrụ 2:38, Ọrụ 3:26, Ọrụ 7: 44-53, Ọrụ 11:18, Ọrụ 14:15, Ọrụ 17: 24-31, Ọrụ 20:21, Ọrụ 26: 18-20
3. Ntụziaka maka ime baptizim (Na -agbada baa n'ime baptizim + n'ime mmụọ nsọ)
Ọrụ 2:38, Ọrụ 8:12, Ọrụ 8: 14-18, Ọrụ 8: 36-39, Ọrụ 9: 17-18, Ọrụ 10: 44-48, Ọrụ 11: 15-18, Ọrụ 17: 31- 34, Ọrụ 18: 8, Ọrụ 19: 2-6, Ọrụ 22:16
4. Ibikwasị aka
Ọrụ 6: 6, Ọrụ 8: 17-18, Ọrụ 9: 12-18, Ọrụ 13: 3, Ọrụ 19: 6, Ọrụ 28: 8
5. Ịnata Mmụọ Nsọ, na -edetụ onyinye onyinye nke eluigwe aka, na -edetụ ire ezi okwu Chineke na ike nke afọ na -abịa.
Ọrụ 1: 5, Ọrụ 1: 7, Ọrụ 2: 1-4, Ọrụ 2: 15-18, Ọrụ 2:33, Ọrụ 2: 38-42, Ọrụ 8: 14-19, Ọrụ 10: 44-47, Ọrụ 19: 6
Na Grik, “okwu ọma” bụ “okwu mara mma” na -ezo aka na asụsụ dị ka, “na -anụ okwu mara mma nke Chineke”
6. Mbilite n'ọnwụ nke ndị nwụrụ anwụ (gụnyere Alaeze Chineke)
Ọrụ 1: 3, Ọrụ 1: 6-7, Ọrụ 1:11, Ọrụ 4: 2, Ọrụ 8:12, Ọrụ 14:22, Ọrụ 19: 8, Ọrụ 20:25, Ọrụ 20:32, Ọrụ 23: 6, Ọrụ 24: 14-21, Ọrụ 26: 6-8, Ọrụ 28:23, Ọrụ 28:31
7. Ikpe ebighi ebi
Ọrụ 2: 19-21, Ọrụ 3:21, Ọrụ 10:42, Ọrụ 17: 30-31, Ọrụ 24:15
1 Ya mere, ka anyị hapụ okwu mbụ nke Kraịst, ma ka anyị gaa n’iru n’izu-okè. Gịnị kpatara na ị na-atọkwa ntọala ọzọ maka nchegharị site n'omume gara aga na maka okwukwe na Chineke? 2 Na maka nkuzi nke baptism na maka ibikwasị aka na n’ihi mbilite n’ọnwụ nke ndị nwụrụ anwụ na maka ikpe ebighi-ebi? 3 Ọ bụrụ na Onyenwe anyị ekwe, anyị ga-eme ya. 4 Ma nke a agaghị ekwe omume nye ndị e merela baptizim 5 ma atatụworị onyinye ahụ sitere n’elu-igwe ma nata Mụọ Nsọ, ma etawo ezi okwu nke Chineke na ike nile nke ụwa nke na-abịa. 6 N’ihi na, ka ha wee mehie ọzọ, ka e meekwa ka ha dị ọhụrụ site na nchegharị, ha na-akpọgide Ọkpara Chineke n’obe nke ugboro abụọ ma mee ka ihere mee ya. 7 N'ihi na uwa nke nāṅu miri-ozuzo nke nādakwasi ya nke-uku, nēweputa kwa ahihia nke bara ndi anēme ya, nānata ngozi n'aka Chineke; 8 Ma ọ buru na ọ muputa ogwu na uke, agāju ya, ọ bughi kwa ka anāma ya ikpe; ma n'ikpeazụ a ga-akpọ ihe ọkụkụ a ọkụ.
Luke 24: 45-49, Ntụziaka sitere na Kraịst
45 Mgbe ahụ ka o meghere uche ha ka ha ghọta Akwụkwọ Nsọ, 46 wee sị ha, "Otú a ka edeworo ya n'akwukwọ nsọ, si, ka Kraist hu ahuhu, si na ndi nwuru anwu bilie n'ubọchi nke -atọ, 47 ka e kwusaa kwa nchegharị maka mgbaghara nke nmehie n'aha ya nye mba nile, malite na Jerusalem. 48 Unu onwe -unu bu ndi -àmà nke ihe ndia. 49 Ma lee, a na m ezitere unu nkwa nke Nna m. Ma nọrọnụ n'obodo a ruo mgbe e yikwasịrị unu ike nke si n'elu. "
Ọrụ 1: 1-11, Okwu mmalite nke Ọrụ
1 N'akwụkwọ nke mbụ, O Theophilus, ekwuwo m banyere ihe niile Jizọs malitere ime na nkuzi, 2 rue ubọchi emere ka O bulie elu, mb aftere O nyere ndi -ozi iwu site na Mọ Nsọ onye ọ họtara. 3 O gosiputara onwe ya na ọ dị ndụ mgbe ọ tara ahụhụ site n'ọtụtụ ihe akaebe, pụtara n'ihu ha n'ime ụbọchị iri anọ na na -ekwu maka ala -eze Chineke. 4 Ma mb whilee Ya na ha nānọ, O nyere ha iwu ka ha ghara isi na Jerusalem je, kama ka ha chere nkwa nke Nnam, nke Ọ siri, I nuru n'ọnum; 5 n'ihi na Jọn ji mmiri mee baptism, mana a ga -eji mmụọ nsọ mee unu baptism ụbọchị ole na ole site ugbu a. " 6 Ya mere, mgbe ha gbakọrọ, ha jụrụ ya, “Onye -nwe, ị ga -eweghachiri Israel alaeze n'oge a? " 7 Ọ sịrị ha, “Ọ bụghị ihe dịịrị unu ịma oge ma ọ bụ oge a kara aka nke Nna debere site n'ike nke aka ya. 8 Ma unu gānata ike mb͕e Mọ Nsọ dakwasiri unu; unu gābu kwa ndi-àmàm nime Jerusalem, na nime Judia dum na Sameria, rue nsọtu uwa. 9 Mb͕e O kwusiri okwu ndia, mb͕e ha nēlegide anya, ewe bulie Ya elu, igwe-oji we kupu Ya n'anya-ha. 10 Mb͕e ha nēlegide anya n'elu-igwe mb͕e Ọ nāga, le, ndikom abua guzoro ha nso n'uwe ọcha, 11 wee sị, “Ndị Galili, gịnị mere unu ji guzoro na -ele anya n'eluigwe? Jizọs a, onye e si n'ebe ị nọ rịgoro n'eluigwe, ga -abịa n'otu ụzọ ahụ ị hụrụ ya ka ọ na -aga eluigwe. "
Ọrụ 2: 1-13, Nwụpụ nke Mmụọ Nsọ
1 Mgbe ụbọchị Pentikọst bịarutere, ha niile gbakọtara n'otu ebe. 2 Na mberede, ụda si n'eluigwe bịa dị ka nnukwu ifufe na-efesi ike, o jupụtakwa ụlọ ahụ dum ebe ha nọ ọdụ. 3 Ewe me ka ha hu ire di iche iche dika ire ọku, o we dakwasi onye ọ bula nime ha. 4 Ha niile wee jupụta na Mmụọ Nsọ wee malite ikwu okwu n'asụsụ dị iche iche dịka Mmụọ Nsọ nyere ha ike ikwu. 5 Ma ndi bi na Jerusalem bu ndi-Ju, ndi sitere na mba nile n'okpuru elu-igwe. 6 Ma n'olu a ìgwè madu ahu nāchikọta onwe-ha, ha we ma jijiji, n'ihi na onye ọ bula nuru ka ha nēkwu n'asusu nke aka ya. 7 Ma ibobo nwuru ha n'aru, ibobo we nwua, si, Ọ bughi ndia nile bu ndi nēkwu okwu bayere ndi Galili? 8 Oleekwa otú anyị si anụ, onye ọ bụla n'ime anyị n'asụsụ nke aka ya? 9 Ndị Patia na ndị Midia na ndị Ilam na ndị bi na Mesopotemia, Judia na Kapadoshia, Pọntọs na Eshia, 10 Phrygia na Pamphylia, Ijipt na akụkụ nke Libya nke Cyrene, na ndị ọbịa si Rom, 11 ma ndị Juu ma ndị na-eso ụzọ ndị Juu, ndị Cret na ndị Arabia-anyị na-anụ ka ha na-asụ asụsụ dị iche iche nke anyị ọrụ dị ike nke Chineke. " 12 O we ju ha nile anya, ha we tua egwu, ha we sirita onwe-ha, Gini ka nka bu? 13 Ma ndị ọzọ na-akwa emo kwuru, sị, "Ha jupụtara na mmanya ọhụrụ."
Ọrụ 2: 14-21, Pita hotara Joel onye amụma
14 Ma Pita guzoro, ya na ndi-ozi iri na otù ahu, weliri olu, gwa ha okwu, si, Ndikom nke Judia, na ndi nile bi na Jerusalem, menu ka unu mara nka, ge-kwa-nu nti n'okum. 15 N'ihi na mmanya adịghị egbu ndị a, dị ka unu chere, n'ihi na ọ bụ naanị awa nke atọ n'ụbọchị. 16 Ma nka bu ihe ekwuru site n’aka Joel onye amuma:
17 "'N’ụbọchị ikpeazụ, ọ ga -abụ, ka Chineke kwuru, na m ga -awụkwasị mmụọ m n’anụ ahụ niile, ụmụ unu ndị ikom na ụmụ unu ndị inyom ga -ebu amụma, ụmụ okorobịa unu ga -ahụkwa ọhụụ, ndị agadi unu ga -arọkwa nrọ; 18 ọbụna ndị odibo m nwoke na ụmụ odibo m n’ụbọchị ndị ahụ ka m ga -awụpụ mmụọ m, ha ga -ebukwa amụma. 19 M'g showme kwa ka ihe -ebube di n'elu -igwe di n'elu na ihe -iriba -ama n'elu uwa di n'okpuru, ọbara, na ọku, na vepo anwụrụ.; 20 Anyanwụ ga -atụgharị ghọọ ọchịchịrị, ọnwa ga -atụgharịkwa ka ọ bụrụ ọbara, tupu ụbọchị Onye -nwe abịa, nnukwu ụbọchị ahụ dịkwa ebube.. 21 Ma ọ ga -eru na onye ọbụla nke na -akpọku aha Onye -nwe ka a ga -azọpụta.'
29 "Ụmụnna m, m nwere ike ịgwa gị n'ekpere banyere nna ochie ahụ bụ David na ọ nwụrụ, e wee lie ya, ili ya dịkwa n'etiti anyị ruo taa. 30 Ya mere, ebe ọ bụ onye amụma, marakwa na Chineke hadụụrụ ya iyi na ọ ga -eme ka otu n'ime ụmụ ya nọkwasị n'ocheeze ya, 31 ọ buru ụzọ hụ ma kwuo banyere mbilite n'ọnwụ Kraịst, na a hapụghị ya n'ime Hedis, anụ ahụ ya ahụghịkwa ire ure. 32 Jizọs a ka Chineke kpọlitere, na anyị niile bụ ndị akaebe. 33 Ebe e buliri ya elu n'aka nri Chineke, ebe ọ natakwara nkwa nke Mmụọ Nsọ site n'aka Nna, ọ wụpụ ihe a nke unu onwe unu na -ahụ ma na -anụkwa.. 34 N'ihi na Devid arịgoghị n'eluigwe, mana ya onwe ya na -asị, '' Onyenwe anyị gwara Onyenwe m, Nọdụ ala n'aka nri m, 35 rue mb͕e M'gēme ka ndi-iro-Gi buru ihe-nb͕akwasi-ukwu-Gi. 36 Ya mere ka ulo Israel nile mara n'ezie na Chineke mere ya Onyenwe anyị na Kraịst, Jizọs a nke unu kpọgidere n'obe. "
Ọrụ 2: 37-43, Ozizi Ndị Ozi
37 Ma mb͕e ha nuru nka, ha tib͕uru ha n'obi, si Pita na ndi-ozi fọduru, Umu-nnam, gini ka ayi gēme? 38 Pita wee sị ha, “Chegharịanụ ka e meekwa onye ọ bụla n'ime unu baptizim n'aha Jizọs Kraịst maka mgbaghara mmehie unu, unu ga -anatakwa onyinye nke Mmụọ Nsọ.. 39 N'ihi na nkwa dịịrị gị na ụmụ gị na ndị niile nọ ebe dị anya, onye ọ bụla Onye -nwe Chineke anyị kpọrọ onwe ya. " 40 Na ọtụtụ okwu ndị ọzọ ọ gbara ama wee gaa n'ihu na -agba ha ume, na -asị, “Zọpụtanụ onwe unu n'ọgbọ a gbagọrọ agbagọ. " 41 Ya mere ndi natara okwu ya, emekwara ha baptism; ewe gbakwụnye ihe dị ka puku mkpụrụ obi puku atọ n'ụbọchị ahụ. 42 Ha we were onwe -ha nye Jehova ozizi ndị ozi na nmekọ, n'inyawa achicha na ekpere. 43 Egwu wee jide mkpụrụ obi ọ bụla, e mekwara ọtụtụ ihe ebube na ihe iriba ama site n'aka ndị ozi.
Ọrụ 3: 13-26, Pita na-ekwusa na veranda nke Solomon
13 Chineke nke Abraham, na Chineke nke Aisak, na Chineke nke Jekob, na Chineke nke nna nna anyi, toro ohu ya Jisos otutoOnye unu nyefere n'aka Paịlet, mgbe o kpebiri ịtọhapụ ya. 14 Ma unu gọnarịrị Onye Nsọ na Onye ezi omume, wee rịọ ka enye gị onye gburu mmadụ, 15 unu gbu -kwa -ra Onye n ofnye ndu, Onye Chineke mere ka O si na ndi nwuru anwu bilie. Nke a ka anyị bụ ndị akaebe. 16 Ma aha ya-site n'okwukwe n'aha ya-emewo ka nwoke a dị ike onye ị na-ahụ ma mara, okwukwe nke sitere n'aka Jizọs enyewo nwoke a ahụike zuru oke n'ihu gị niile.
17 Ma ub͕u a, umu-nnam, amataram na unu mere ihe n'amaghi-ama, dika ndi-isi-unu. 18 Mana ihe Chineke buru n'amụma site n'ọnụ ndị amụma niile, na Kraịst ya ga -ata ahụhụ, o si otu a mezuo. 19 Ya mere, chègharianu, chigharia, ka ehichapu nmehie nile unu, 20 ka oge inye ume wee si n'ihu Onye -nwe bịa, na ka o wee ziga Kraịst ahụ a họpụtara maka gị, Jizọs, 21 onye eluigwe ga -anabata ruo oge iweghachi ihe niile nke Chineke kwuru site n'ọnụ ndị amụma ya dị nsọ ogologo oge gara aga. 22 Moses we si, Onye -nwe -ayi Jehova g willme ka onye -amuma, nke di ka mu onwem, biliere gi site n'etiti umu -nne -gi. Ị ga -ege ya ntị n'ihe ọ bụla ọ ga -agwa gị. 23 Ọ gēru kwa, na nkpuru-obi ọ bula nke nāgaghi-ege nti onye-amuma ahu, agēbipu ya n'etiti ndi Israel. 24 na ndị amụma niile kwuru, site na Samuel na ndị na -eso ya, kwukwara ụbọchị ndị a. 25 Unu bụ ụmụ ndị amụma na ọgbụgba ndụ nke Chineke na nna nna unu gbara, na -asị Abraham, 'Na mkpụrụ gị ka a ga -agọzi ezinụlọ niile nke ụwa.' 26 Chineke, ebe O mere ka odibo ya bilie, buru ụzọ zitere ya ya ka ọ gọzie gị site n'ịtụgharị onye ọ bụla n'ime gị n'ajọ omume gị. "
Ọrụ 4: 1-2, iwe were ndị Sadusii
Na1 Ma mb͕e ha nāgwa ndi-Ju okwu, ndi-nchu-àjà na onye-isi ulo uku Chineke na ndi-Sadusi biakutere ha, 2 ezigbo iwe were ha n'ihi na ha na -ezi ndị mmadụ ihe ma na -ekwusa n'ime Jizọs mbilite n'ọnwụ.
Ọrụ 4: 8-12, Pita n'ihu kansụl
8 Pita we juputa na Mọ Nsọ, si ha, Unu ndi-isi nke ndi-okenye na ndi-okenye, 9 ọ bụrụ na a na-enyocha anyị taa gbasara ezi ọrụ a na-eme nwoke nwere nkwarụ, site na esi eme ka nwoke a gwọọ, 10 ka amara unu nile na umu Israel nile na n'aha Jizọs Kraịst onye Nazaret, onye ị kpọgidere n'obe, onye Chineke mere ka o si na ndi nwuru anwu bilie- site n'aka ya nwoke a na -eguzo n'ihu gị nke ọma. 11 Jizọs a bụ nkume nke unu, ndị na -ewu ụlọ, jụrụ, nke ghọrọ isi nkuku ụlọ. 12 Nzọpụta adịghịkwa n'onye ọ bụla ọzọ, n'ihi na ọ dịghị aha ọzọ n'okpuru eluigwe nke enyere n'etiti mmadụ nke a ga -eji zọpụta anyị. "
Ọrụ 4: 24-31, ekpere ndị kwere ekwe
Ọrụ 5: 12-16, Ọrụ Ndịozi
12 Ugbu a, a na -eme ọtụtụ ihe ịrịba ama na ihe ebube n'etiti ndị mmadụ site n'aka ndị ozi. Ha nile nọkọkwara na Portico Solomon. 13 Ọ dighi onye ọ bula nime ha nke dakwasiri ha, ma ndi Israel nwere ugwu nke-uku. 14 Ma agātukwasiri ndi kwere ekwe kari Onye-nwe-ayi kari, ọtutu ndi-nwoke ma ndinyom. 15 nke mere na ha kpọpụrụ ndị ọrịa n'okporo ámá ma dọba ha n'ihe ndina na ihe ndina, ka Pita na -abịa ma ọ dịkarịa ala, onyinyo ya wee dakwasị ụfọdụ n'ime ha. 16 Ndi mmadu we si n’obodo nile nke di na Jerusalem chiri ndi Oria na ndi ojoo ndi ojoo ewedara n’ari na aru ha niile.
Ọrụ 5: 29-32, ejidere ndị ozi
29 Ma Pita na ndi-ozi zara, si, Ayi aghaghi irubere Chineke isi kari madu. 30 Chineke nna -ayi -hà mere ka Jisus si n'ọnwu bilie, Onye unu onwe -unu b byuru, nākwuba Ya n'elu osisi. 31 Chineke buliri ya elu n'aka nri ya ka ọ bụrụ onye ndu na onye nzọpụta, inye Israel nchegharị na mgbaghara mmehie. 32 Ayi onwe -ayi bu kwa ndi -àmà nke ihe ndia, otú a ka Mọ Nsọ di kwa, nke Chineke nyere ndi n obeyrubere ya isi. "
Ọrụ 5: 40-42, Na-eche mkpagbu ihu
Ọrụ 6: 2-7, Nhọrọ nke ndị enyemaka
Mmadụ iri na abụọ ahụ kpọkọtara ọnụ ọgụgụ ndị na -eso ụzọ ya, sị, “O zighị ezi ka anyị kwụsị ikwusa okwu Chineke iji jeere tebụl ozi. 3 Ya mere, ụmụnna m, họpụta n'etiti unu mmadụ asaa ndị mara mma, jupụta na Mmụọ na amamihe, onye anyị ga -ahọpụta maka ọrụ a. 4 Ma anyị ga -arara onwe anyị nye ekpere na ije ozi nke okwu ahụ. " 5 Ihe ha kwuru masịrị nzukọ ahụ dum, ha wee họrọ Stivin, nwoke jupụtara okwukwe na mmụọ nsọ, na Filip, na Prokọrọs, na Nikanọ, na Timọn, na Parmenas, na Nikolaọs, onye na -eso ụzọ ndị Juu nke Antiọk. 6 Ha debere ha n'ihu ndị ozi, ha we kpe ekpere bikwasi ha aka n'isi. 7 Okwu Chineke we nāba uba, ọnu-ọgugu nke ndi n disciplesso uzọ-ya we ba uba nke-uku na Jerusalem; ọtutu ndi-nchu-àjà wezuga okwukwe ahu.
Ọrụ 7: 2-8, Abraham, Aịzik na Jekọb
2 Ma Stivin kwuru, sị: “Ụmụnna m na ndị nna m, nụrụnụ. Chineke nke ebube pụtara ìhè nye nna anyị Abraham mgbe ọ nọ na Mesopotemia tupu ọ biri na Heran, 3 Ọ si ya, Si n'ala-gi na n'etiti umu-nna-gi pua, ba n'ala ahu nke M'gēgosi gi. 4 O wee si n'ala ndị Kaldia pụọ ​​wee biri na Heran. Ma mb hise nna -ya nwusiri, Chineke wepuru ya n'ebe ahu ba n'ala nka nke unu onwe -unu n livingbi nime ya. 5 Ma o nyeghị ya ihe nketa n'ime ya, ọbụnadị otu ụkwụ, kama o kwere nkwa inye ya ya ka ọ bụrụ ihe nketa ya na ụmụ ya ga -anọchi ya, n'agbanyeghị na ọ mụtaghị nwa. 6 Chineke we kwue okwu a, na ụmụ ya ga -abụ ndị ọbịa n'ala nke ndị ọzọ, onye ga -eme ha ohu wee weda ha ala narị afọ anọ. 7 'Ma m ga -ekpe mba ha na -ejere ozi ikpe,' ka Chineke kwuru, 'emesịa ha ga -apụta kpọọ isiala n'ebe a.' 8 O wee nye ya ọgbụgba ndụ nke ibi úgwù. Otu a ka Abraham si mụọ Aịzik, bie ya úgwù n'ụbọchị nke asatọ, Aịzik wee mụọ Jekọb, Jekọb abụrụ nna ochie iri na abụọ ahụ.
Ọrụ 7: 9-16, Josef
9 “Ndị nna ochie, ekworo Josef, resịrị ya n'Ijipt; ma Chineke nọnyeere ya 10 we naputa ya na nkpab hisu -ya nile, nye ya amara na amam -ihe n'iru Fero, bú eze Ijipt, onye mere ya onye -isi ala Ijipt na ulo -ya nile. 11 Ma oké unwu biara n'ala Ijipt nile na Kenean, na ọtutu nkpab ,u, nna -ayi -hà ahughi kwa nri. 12 Ma mb Jacobe Jekob nuru na ọka di n'Ijipt, o we zipu nna -ayi -hà na nke -mbu -ha. 13 Na nleta nke ugboro abụọ Josef mere ka ụmụnne ya mara ya, Fero wee mata ezinụlọ Josef. 14 Josef wee ziga kpọọ Jekọb nna ya na ndị ikwu ya niile, mmadụ iri asaa na ise. 15 Jekob we ridata n'Ijipt, nwua, ya onwe -ya na nna -ayi -hà; 16 e wee bulata ha na Shekem wee lie ha n'ili nke Abraham zụtara n'ọnụ ego ọla -ọcha n'aka ụmụ Hamọ na Shekem.
Ọrụ 7: 17-29, Moses na ndọrọ n'agha n'Ijipt
17 “Ma ka oge nkwa ahụ, nke Chineke kwere Abraham, na -eru nso, ndị mmadụ mụbara wee bawanye n'Ijipt 18 eze ọzọ, nke nāmaghi Josef, biliri n'Ijipt. 19 O ji akọ mee agbụrụ anyị aghụghọ ma manye ndị nna anyị ikpughe ụmụ ọhụrụ ha, ka a ghara idebe ha ndụ. 20 N'oge a ka amuru Moses; o we di nma n'anya Chineke. Ọ zụlitere ya ọnwa atọ n'ụlọ nna ya. 21 na mgbe e kpughere ya, ada Fero kuchiri ya wee zụlite ya ka nwa ya. 22 Ewe zí Moses ihe n'amam -ihe nile nke ndi Ijipt, o we di ike n'okwu -ya na omume -ya. 23 “Mgbe ọ gbara afọ iri anọ, o batara n'obi ya ileta ụmụnne ya, ụmụ Israel. 24 Mgbe ọ hụrụ ka a na -emejọ ha, ọ gbachitere onye ahụ a na -emegbu emegwara ma bọọrọ ya ọbọ site n'igbu onye Ijipt ahụ. 25 O chere na ụmụnne ya ga -aghọta na Chineke na -enye ha nzọpụta site n'aka ya, mana ha aghọtaghị. 26 N'echi ya, ọ pụtara n'ihu ha ka ha na -ese okwu wee gbalịa ka ha na ha dị ná mma, sị, 'Ụmụnna, unu bụ ụmụnne. Gịnị mere unu ji na -emejọ ibe unu? ' 27 Ma nwoke ahu nke nēmejọ ibe-ya tupuru ya, si, Ònye mere gi ka i buru onye-isi na onye-ikpé n'ebe ayi nọ? 28 Ị̀ chọrọ igbu m dị ka i gburu onye Ijipt ụnyaahụ? ' 29 Na nzaghachi a, Mozis gbara ọsọ wee bụrụ onye a dọọrọ n'agha n'ala Midian, ebe ọ mụrụ nna ụmụ nwoke abụọ.
Ọrụ 7: 30-43, Moses na ọpụpụ
30 “Ma mgbe afọ iri anọ gachara, otu mmụọ ozi pụtara n'ihu ya n'ọzara Ugwu Saịnaị n'ọkụ n'ọhịa. 31 Mgbe Mozis hụrụ ya, ihe ọ hụrụ tụrụ ya n'anya, ma ka ọ na -abịaru nso ile anya, olu Jehova bịara: 32 'Abụ m Chineke nna nna gị, Chineke nke Abraham na nke Aịsak na nke Jekọb.' Moses we nāma jijiji, ọ meghi kwa anya ile anya. 33 Jehova we si ya, Yipu akpukpọ-ukwu n'ukwu-gi: n'ihi na ebe i nēguzo bu ala nsọ. 34 N'ezie ahuwom nweda -n'ala nke ndim nke di n'Ijipt, anuwokwam ude -ha, m'we ridata inaputa ha. Ugbu a, bịa, m ga -eziga gị Ijipt. '
35 Moses a, onye ha juworo, si, Whonye mere gi onye -isi na onye -ikpé?nwoke a ka Chineke zitere dị ka onye na -achị achị na onye mgbapụta site n'aka mmụọ ozi ahụ nke pụtara n'ihu ya n'ime ọhịa. 36 Nwoke a dupụtara ha, na -arụ ọrụ ebube na ihe iriba ama n'Ijipt na n'Oké Osimiri Uhie na n'ọzara ruo afọ iri anọ. 37 Nke a bụ Mozis gwara ụmụ Izrel, 'Chineke ga -esi n’etiti ụmụnne gị kpọlitere gị onye amụma dịka m. ' 38 Onye a bụ onye ya na mmụọ ozi ahụ gwara ya okwu n'Ugwu Saịnaị, ya na ndị nna nna anyị nọ n'ọgbakọ. Ọ natara amụma dị ndụ inye anyị. 39 Nna -ayi -hà jụrụ i obeya Ya nti, kama ha wepuru Ya n'otù, n'obi -ha we chigharia ba n'Ijipt, 40 si Eron, Mere ayi chi ndi nēje n'iru ayi; Ma Mozis a nke dupụtara anyị n'ala Ijipt, anyị amaghị ihe mere ya.' 41 Ha we me nwa -ehi n'ubọchi ahu, we chuara arusi àjà, we wereuria n'ọlu aka -ha. 42 Ma Chineke chigharịrị wee nyefee ha ka ha na -efe ụsụụ eluigwe, dị ka e dere ya n'akwụkwọ ndị amụma, sị: “'Unu webatara anụ ọhịa na àjà e gburu egbu n'ime afọ iri anọ m nọ n'ọzara, ụlọ Izrel? ? 43 I buliri ụlọikwuu Moloch na kpakpando nke chi gị Refan, ihe oyiyi nke ị mere ka ị fee; M'g willziga kwa unu je biri n'ala ọzọ n'ofè Babilon.
Ọrụ 7: 44-53, Ịjụ ndị amụma
44 “Nna nna anyị ha nwere ụlọikwuu ịgba ama n'ọzara, dịka onye gwara Moses okwu nyere ya iwu ka ọ rụọ ya, dịka ụkpụrụ nke ọ hụworo. 45 Nna -ayi -hà me -kwa -ra ka ha bata ya na Joshua mb theye ha wepuru ala -eze ahu nke Chineke napuru ala -ha n'iru nna -ayi -hà. Otú ahụ ka ọ dị ruo ụbọchị Devid. 46 onye hụtara amara n'ihu Chineke ma rịọ ka a chọtara ya ebe obibi nke Chineke Jekọb. 47 Ma, ọ bụ Sọlọmọn rụụrụ ya ụlọ. 48 Ma Onye Kasị Elu anaghị ebi n'ụlọ ejiri aka rụọ, dika onye -amuma kwuru, 49 “'Eluigwe bụ ocheeze m, ụwa bụkwa ihe mgbakwasị ụkwụ m. Olee ụdị ụlọ unu ga -ewuru m, ka Jehova kwuru, ma ọ bụ gịnị bụ ebe izu ike m? 50 Ọ bughi akam mere ihe ndia nile? 51 “Unu ndị isi ike, ndị a na-ebighị úgwù n'obi na ntị, unu na-eguzogide Mmụọ Nsọ mgbe niile. Dị ka nna nna unu mere, unu onwe unu. 52 Nye n'ime ndị amụma ka nna nna unu hà na -akpagbughị? Ha we b killedue ndi buru uzọ mara ọbibia nke Onye ezi omume ahu, Onye I rapuru ub andu a, b muru kwa, 53 gị onye natara iwu dịka ndị mmụọ ozi nyefere ya ma ị debeghị ya. "
Ọrụ 7: 54-60, Nkume a tụrụ Stivin
54 Ma mb whene ha nuru ihe ndia, iwe were ha nke -uku, ha we tukwasi ya ezé. 55 Ma Ya onwe -ya juputara na Mọ Nsọ, legidere anya n'elu -igwe, hu ebube Chineke, na Jisus ka Ọ n atguzo n'aka -nri Chineke. 56 O wee sị, "Le, ahurum elu -igwe ka emegheworo, ka Nwa nke madu n standingguzo kwa n'aka -nri Chineke. " 57 Ma ha tiri mkpu n'oké olu wee mechie ntị ha wee jiri ọsọ bịakwute ya. 58 Ekem mmọ ẹbịn enye ẹsio ke obio ẹnyụn̄ ẹtọn̄ọ enye ke itiat. Na ndị akaebe tọgbọrọ uwe ha n'ụkwụ otu nwa okorobịa aha ya bụ Sọl. 59 Ma ka ha na -atụ Stivin nkume, o tiri mkpu, "Onyenwe anyị Jizọs, nata mmụọ m." 60 O wee gbuo ikpere n'ala wee tie mkpu n'oké olu, "Onyenwe anyị, emela mmehie a megide ha." Mgbe o kwuchara nke a, ụra buuru ya.
Ọrụ 8: 5-8, Filip na-ekwusa Kraịst
5 Filip gbadara obodo Sameria na kwusaara ha Kraịst. 6 Ìgwè mmadụ ahụ wee jiri otu obi whata ntị n'ihe Filip na -ekwu, mgbe ha nụrụ ya wee hụ ihe ịrịba ama ndị o mere. 7 N'ihi na ndị mmụọ na -adịghị ọcha na -eti mkpu n'oké olu, n'etiti ọtụtụ ndị nwere ha, a gwọkwara ọtụtụ ndị nwere ahụ mkpọnwụ ma ọ bụ ndị ngwụrọ. 8 Ntre akwa idatesịt odu ke obio oro.
Ọrụ 8:12, Nkwusa Filip
12 Mana mgbe ha kwenyere Filip ka ọ na -ekwusa ozi ọma gbasara ndị mmụọ ozi ala eze Chineke na aha Jisus Kraist, emere ha baptism, ma ndị nwoke ma ndị nwanyị.
Ọrụ 8: 14-22, Sameria nabatara okwu Chineke
14 Mgbe ndị ozi nọ na Jerusalem nụrụ na Sameria anabatala okwu Chineke, ha zigaara ha Pita na Jọn, 15 onye gbadara kpeere ha ekpere ka ha nata Mmụọ Nsọ, 16 n'ihi na ọ gbabeghị onye ọbụla n'ime ha, mana e mere ha baptism nanị n'aha nke Onye -nwe Jisus. 17 mgbe ahụ ha bikwasịrị ha aka n'isi, ha wee nata Mmụọ Nsọ. 18 Ugbu a mgbe Saịmọn hụrụ nke ahụ e nyere mmụọ nsọ site na mbịkwasị aka nke ndị -ozi, o nyere ha ego, 19 na -asị, “Nye m ike a, ka onye ọ bụla M na -ebikwasị aka m nwere ike nata Mmụọ Nsọ. " 20 Ma Pita sịrị ya, “Ka ọlaọcha gị soro gị laa n'iyi, n'ihi na i chere na ị ga -eji ego nweta onyinye Chineke! 21 I nweghị òkè ma ọ bụ ihe nketa n'okwu a, n'ihi na obi gị ezighi ezi n'ihu Chineke. 22 Ya mere, chegharịa maka ajọọ -omume nke a gị, ma rịọ Onye -nwe ka ọ gbaghara gị ebum -n'obi gị.
Ọrụ 8: 26-39, Filip na ọnaozi
26 Mọ-ozi nke Onye-nwe we si Filip, Bilie, n'uzọ Ndida rue uzọ nke si na Jerusalem arida na Geza. Nke a bụ ọzara. 27 O we bilie la. O nwekwara onye Etiopia, onozi, onye na-arụ ọrụ n'obí eze nke Candace, eze nwanyị ndị Etiopia, onye na-elekọta akụ ya niile. Ọ bịarutere Jerusalem ịga fee ya ofufe 28 o we nālaghachi, nānọdu kwa n'ub charọ-ya, nāgu kwa Aisaia onye-amuma. 29 Mọ ahu we si Filip, Gabiganu n'inyinya a. 30 Filip we b toakuru ya, we nu ya ka ọ nāgu akwukwọ Aisaia onye-amuma, ọ si, Ì nāghọta ihe i nāgu? 31 Ọ si, How-è, n'ihi na aju g ,si a unlessa ma ọ buru na ọ dighi onye g medum? O we kpọ Filip ka ọ rigota ka ya na ya biri. 32 Ugbu a akụkụ Akwụkwọ Nsọ ọ na -agụ bụ nke a:Dị ka atụrụ, e duuru ya gaa n'igbu ya, dị ka nwa atụrụ n'ihu onye na -akpacha ajị ya, wee meghee ọnụ ya. 33 Na mweda n'ala ya, a napụrụ ya ikpe. Onye nwere ike ịkọwa ọgbọ ya? N'ihi na ewepụrụla ndụ ya n'ụwa. ”
34 Ọnaozi ahụ wee sị Filip: “Onye ka m jụrụ gị, onye amụma a kwuru ihe a, banyere onwe ya ka ọ bụ maka onye ọzọ?” 35 Filip we saghe ọnu-ya, bido n'isi Akwụkwọ Nsọ a zisaara ya ozi ọma bayere Jisus. 36 Ma ka ha na -aga n'ụzọ, ha rutere na mmiri, ọnaozi ahụ wee sị, "Lee, ebe a bụ mmiri! Gịnị na -egbochi ime m baptizim? " 38 O wee nye iwu ka ụgbọ ịnyịnya ahụ kwụsị, ha abụọ banyere n'ime mmiri, Filip na ọnaozi, o wee mee ya baptizim. 39 Ma mb theye ha siri na miri rigota, Mọ nke Jehova wezuga Filip, onozi ahu ahughi kwa ya ọzọ, we n onje n'uzọ-ya nā rejouri.
Ọrụ 9: 1-9, Ọhụụ n'okporo ụzọ Damaskọs
1 Ma Sọl, ebe ọ ka na -eku ume iyi egwu na igbu mmadụ megide ndị na -eso ụzọ Onyenwe anyị, gakwuuru nnukwu onye nchụàjà 2 o we riọ Ya ka Ọ degara ya ulo -nzukọ di na Damaskọs, ka ọ buru na o nwere ihe o nwere ụzọ ahụ, ma nwoke ma ọ bụ nwanyị, ọ nwere ike kpụrụ ha agbụ na Jerusalem. 3 Ma ka ọ na -aga n'ụzọ, ọ bịaruru Damaskọs nso, na mberede, ìhè sitere n'eluigwe nwuo gburugburu ya. 4 Mgbe ọ dara n'ala, ọ nụrụ olu na -asị ya, "Sọl, Sọl, gịnị mere ị na -akpagbu m?" 5 O we si, Ì bu onye, ​​Onye -nwe -ayi? O wee sị, "Abụ m Jizọs, onye ị na -akpagbu. 6 Ma bilie, banye n'ime obodo, a ga -agwa gị ihe ị ga -eme. " 7 Ndị ikom ya na ha so na -akwụsị ikwu okwu, na -anụ olu ahụ ma ha ahụghị onye ọ bụla. 8 Sọl si n'ala bilie, n'agbanyeghị na anya ya mepere emepe, ọ hụghị ihe ọ bụla. Ntre mmọ ẹmụm enye ubọk ẹnyụn̄ ẹda enye ẹdụk Damascus. 9 Ndien enye ikwe usụn̄ ke usen ita, idiaha udia inyụn̄ in̄wọn̄ke n̄kpọ.
Ọrụ 9: 10-19, Sọl wee malite ịhụ ụzọ, jupụta na mmụọ nsọ, e mee ya baptizim
10 Ugbu a, e nwere otu onye na -eso ụzọ na Damaskọs aha ya bụ Ananaịas. Onyenwe anyị gwara ya n'ọhụụ, "Ananayas." Ọ si, Lekwam, Onye -nwe -ayi. 11 Onyenwe anyị wee sị ya, “Bilie gaa n'okporo ụzọ a na -akpọ Nke Kwụ Ọtọ, chọta otu nwoke Tasọs aha ya bụ Sọl, maka na ọ na -ekpe ekpere. 12 ọ hụwokwa n'ọhụụ otu nwoke aha ya bụ Ananayas batara bikwasi ya aka ya abụọ ka o wee hụwa ụzọ. " 13 Ma Ananaịas zara, “Onyenwe anyị, anụla m site nʼọtụtụ mmadụ banyere nwoke a, ihe ọjọọ o mere ndị nsọ gị nọ na Jerusalem. 14 N'ebe a kwa, o nwere ikike site n'aka ndị isi nchụàjà iji kee ndị niile na -akpọku aha gị agbụ. ” 15 Ma Onye -nwe sịrị ya, Gaa, n'ihi na ọ bụ ngwa ọrụ m họọrọ iburu aha m n'ihu ndị mba ọzọ na ndị eze na ụmụ Izrel. 16 N'ihi na m ga -egosi ya oke ahụhụ ọ ga -ata n'ihi aha m. " 17 Ya mere Ananaịas pụrụ wee banye n'ime ụlọ. Na ibikwasị ya aka n'isi Ọ sịrị, “Nwanne Sọl, Onyenwe anyị Jisọs onye pụtara ìhè n'ihu gị n'ụzọ nke i siri bịa zitere m ka i wee hụwa ụzọ na ịhụ ụzọ. jupụta na Mmụọ Nsọ. " 18 Ngwa ngwa ihe dika akpịrịkpa wee si n'anya ya dapụ, o wee malite ịhụ ụzọ. Ekem enye adaha ke enyọn̄ ana baptism; 19 o we nēri, we di ike. Ya na ndị na-eso ụzọ ya nọ na Damaskọs ruo ọtụtụ ụbọchị.
Ọrụ 9: 20-22, Sọl malitere ime nkwusa
Ọrụ 9:31, Ọganihu nzụkọ
31 Ya mere nzukọ Kraist dị na Judia na Galili na Sameria niile nwere udo, a na -ewulikwa ya elu. Na na -ejegharị n'egwu Onyenwe anyị na nkasi obi nke Mmụọ Nsọ, ọ bawanyere.
34 Ya mere, Pita meghere ọnụ ya wee sị: “N'ezie aghọtara m nke ahụ Chineke adịghị ele mmadụ anya n'ihu, 35 ma na mba ọ bụla onye na -atụ egwu ya ma na -eme ezi ihe bụ onye ọ na -anabata nke ọma. 36 Banyere okwu ahụ o zigaara Israel, na -ekwusa ozi ọma udo site na Jizọs Kraịst (ọ bụ Onyenwe ihe niile), 37 unu onwe -unu matara ihe mere na Judia dum, malite na Galili mb thee baptism nke Jọn kwusara siri, 38 ka Chineke si were Mmụọ Nsọ na ike tee Jizọs onye Nazaret mmanụ. O wee na -eme ihe ọma, na -agwọkwa ndị niile ekwensu na -emegbu, n'ihi na Chineke nọnyeere ya. 39 Anyị bụkwa ndị akaebe nke ihe niile o mere ma n'obodo ndị Juu ma na Jerusalem. Ha gburu ya n'osisi n'elu osisi, 40 ma Chineke kpọlitere ya n'ụbọchị nke atọ wee mee ka ọ pụta ìhè, 41 ọ bughi madu nile, kama ọ bu ayi, ndi Chineke rọputara ibu ndi -àmà, ndi soro Ya rie ihe du kwa mb aftere O siri na ndi nwuru anwu bilie. 42 O nyekwara anyị iwu ikwusara ndị mmadụ ozi ọma na ịgba ama na ọ bụ onye Chineke họpụtara ka ọ bụrụ onye ikpe nke ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ.. 43 Ọ bụ ya ka ndị amụma niile na -agbara na onye ọ bụla nke kwere na ya na -enweta mgbaghara mmehie site n'aha ya. "
Ọrụ 10: 44-48, Mmụọ Nsọ dakwasịrị ndị mba ọzọ
44 Mgbe Pita ka nọ na -ekwu ihe ndị a, Mmụọ Nsọ dakwasịrị ndị niile nụrụ okwu ahụ. 45 Ọ tụkwara ndị kwere ekwe n'anya n'etiti ndị e biri úgwù, ndị soro Pita bịa, n'ihi na a wụsara onyinye nke Mmụọ Nsọ si ọbụnadị na ndị Jentaịlụ. 46 N'ihi na ha nānu ka ha n speakingkwu okwu n'asusu di iche iche n andto kwa Chineke. Mgbe ahụ Pita kwupụtara, 47 "Ọ nwere onye nwere ike igbochi mmiri ime ndị a baptizim, ndị natara mmụọ nsọ dịka anyị natara? " 48 O nyekwara iwu ka e mee ha baptizim n'aha Jizọs Kraịst. Mgbe ahụ, ha rịọrọ ya ka ọ nọrọ ruo ụbọchị ụfọdụ.
Ọrụ 11: 1-18, Pita na-agba akaebe gbasara ndị mba ọzọ
1 Ugbu a ndị ozi na ụmụnna nọ na Judia niile nụrụ na ndị mba ọzọ anatawokwa okwu Chineke. 2 Ya mere, mgbe Pita gbagoro Jerusalem, ndị na -ebi úgwù katọrọ ya, na -asị, 3 “Ị gakwuuru ndị ikom a na -ebighị úgwù wee soro ha rie ihe.” 4 Ma Pita malitere kọwaara ha ya n'usoro: 5 “Anọ m na obodo Jopa na -ekpe ekpere, na ọhụụ, ahụrụ m ọhụụ, ihe dị ka nnukwu akwa na -agbadata, na -agbadata site na nkuku anọ ya, ọ bịakwutere m. 6 N'ile ya anya nke ọma, ahụrụ m anụmanụ na anụ ọhịa na anụ na -akpụ akpụ na anụ ufe nke ikuku. 7 M wee nụ olu na -asị m, Pita, bilie; gbuo rie. ' 8 Ma asịrị m, 'Mba, Onyenwe m; n'ihi na ọ dịghị ihe nkịtị ma ọ bụ ihe na -adịghị ọcha batara n'ọnụ m. ' 9 Ma olu ahụ zara nke ugboro abụọ site n'eluigwe, sị, 'Ihe Chineke mere ka ọ dị ọcha, akpọla ihe nkịtị.' 10 Nke a mere ugboro atọ, ewe dọlite ​​ha niile ọzọ n'eluigwe. 11 Ma, le, n'otù oge ahu ndikom atọ biaruru ulo ahu nke ayi onwe -ayi nọ nime ya, ezigara m Sesaria. 12 Mmụọ nsọ wee gwa m ka m soro ha gaa, n'emeghị m ihe ọ bụla. Ụmụnne isii a sokwa m, anyị wee banye n'ụlọ nwoke ahụ. 13 Ọ gwakwara anyị otu o siri hụ mmụọ ozi ka ọ na -eguzo n'ụlọ ya sị, 'Ziga na Jọpa kpọta Saịmọn onye a na -akpọ Pita; 14 ọ ga -ezi unu ozi nke a ga -eji zọpụta unu, gị na ezi na ụlọ gị niile. ' 15 Ka m malitere ikwu okwu, Mmụọ Nsọ dakwasịrị ha dịka ọ dakwasịrị anyị na mbido. 16 M'we cheta okwu Jehova, otú O siri,Jọn ji mmiri mee baptism, ma a ga -eji mmụọ nsọ mee unu baptizim. ' 17 Ọ bụrụkwa na Chineke nyere ha otu onyinye ahụ dịka o nyere anyị mgbe anyị kwere n'Onyenwe anyị Jizọs Kraịst, onye ka m bụ ka m ga -eguzo n'ụzọ Chineke? ” 18 Mgbe ha nụrụ ihe ndị a, ha agbachi nkịtị. Ha we nye Chineke otuto, si,Ya mere, Chineke nyekwara ndị mba ọzọ nchegharị nke na -eduba na ndụ. "
Ọrụ 13:1-3, Izipụ ga-eje ozi
1 Ugbu a e nwere na chọọchị dị n'Antiọk ndị amụma na ndị nkuzi, Banabas, Simeon onye a na -akpọ Niger, Lucius onye Saịrini, Manaen enyi Herọd tetrarch, na Sọl. 2 mgbe ha nākpọ isi ala nye Onye -nwe -ayi, n fastingbu kwa ọnu, Mọ Nsọ siri"Hapụnụ m Banabas na Sọl maka ọrụ m kpọrọ ha." 3 Ekem ke ẹma ẹketre udia ẹnyụn̄ ẹbọn̄ akam ha bikwasịrị ha aka n'isi ma zipụ ha.
Ọrụ 13: 8-11, ịba mba nke onye mmegide
8 Ma Elimas onye na -eme anwansi (n'ihi na nke ahụ bụ ihe aha ya pụtara) na -emegide ha, na -achọ ime ka onye na -achị ógbè ahụ pụọ n'okwukwe. 9 Ma Sọl, onye anākpọ kwa Pọl, jupụta na Mmụọ Nsọ, legidere ya anya 10 wee sị, “Gị nwa ekwensu, onye iro nke ezi omume niile, juputara n'aghụghọ na imebi ihe niile, ị gaghị akwụsị ime ụzọ gbagọrọ agbagọ nke Onye -nwe? 11 Ugbu a, lee, aka Onyenwe anyị dịkwasịrị gị, ị ga -ekpu ìsì, ị gaghịkwa ahụ anyanwụ ruo nwa oge. ” Ozugbo ahụ, igwe ojii na ọchịchịrị dakwasịrị ya, ọ na -agagharị na -achọ ndị ga -ejide ya n'aka.
Ọrụ 13: 16-25, na-ekwusa gbasara ndị amụma
“Ndị Izrel na unu ndị na -atụ egwu Chineke, geenụ ntị. 17 Chineke nke ndi nka Israel rọputara nna -ayi -hà, me kwa ka ndi Israel di uku mb theire ha nọ n'ala Ijipt, were kwa ogwe -aka di elu duputa ha nime ya. 18 O we nagide ha ihe dika ọgu arọ abua n'ọzara. 19 Mgbe o bibisịrị mba asaa n'ala Kenean, o nyere ha ala ha ka ọ bụrụ ihe nketa. 20 Ihe a niile were ihe dị ka afọ 450. Ma mgbe nke ahụ gasịrị, o nyere ha ndị ikpe ruo mgbe Samuel onye amụma. 21 Ha wee rịọ ka e nye ha eze, Chineke wee nye ha Sọl nwa Kish, nwoke si n'ebo Benjamin, ruo afọ iri anọ. 22 Ma mb hee o wepusiri ya, ọ welie Devid ibu eze -ha, onye ọ b testiara àmà bayere ya, si, Achọtawom nime Devid nwa Jesi nwoke dika obim si achọ, onye g dome ihe nile m'nāchọ. 23 Nime nkpuru nwoke a, Chineke wetara Israel Onye nzọpụta, Jizọs, dị ka o kwere na nkwa. 24 Tupu ọbịbịa ya, Jọn agwala ndị Izrel niile baptizim nke nchegharị. 25 Ma mgbe Jọn na -agbacha ọsọ ya, ọ sịrị, 'Gịnị ka unu chere na m bụ? Abụghị m ya. Ee e, kama lee, otu onye na -abịa n'azụ m, onye m na -erughị eru ịtọpụ akpụkpọ ụkwụ ya. '
Ọrụ 13: 26-35, ikwusa ozi ọma banyere Jizọs kpọlitere n'ọnwụ
26 “Ụmụnna m, ụmụ ezinụlọ Abraham, na ndị nọ n'etiti unu na -atụ egwu Chineke, e zitere anyị ozi nke nzọpụta a. 27 Maka ndị bi na Jerusalem na ndị na -achị ha, n'ihi na ha amataghị ya ma ọ bụ ghọta okwu ndị amụma, nke a na -agụ kwa ụbọchị izu ike, mezuru ha site n'ịkatọ ya. 28 Ọ bụ ezie na ha ahụghị ikpe ọmụma nke kwesịrị ọnwụ, ha rịọrọ Paịlet ka e gbuo ya. 29 Mb whene ha mezuru ihe nile edeworo n'akwukwọ nsọ bayere Ya, ha si n'elu osisi ridata Ya, tọb inọ Ya n'ílì. 30 Ma Chineke kpọlitere ya n'ọnwụ, 31 ọ we me ka ọ hu Ya anya ọtutu ubọchi, bú ndi Ya na Galili soro Jerusalem rigoro, ndi bu kwa ndi -àmà -Ya ub theu a nye ndi -Ju. 32 Anyị na -ezikwa unu ozi ọma nke Chineke kwere ndị nna nna, 33 nke a ka o mezuworo anyị ụmụ ha site n'ịkpọlite ​​Jizọs, dịka e dekwara ya n'Abụ Ọma nke abụọ, 'Ị bụ Ọkpara m, taa amụọla m gị.' 34 Ma ebe O mere ka O si na ndi nwuru anwu bilie, ka Ọ ghara ilaghachi n'ire ure ọzọ, O kwuwo otú a, si, M'g givenye unu ngọzi di nsọ nke kwesiri ntukwasi -obi nke Devid. 35 Ya mere ọ na -ekwukwa n'abụ ọma ọzọ, '' 'Ị gaghị ekwe ka Onye Nsọ gị hụ ire ure. '
36 N'ihi na Devid, mgbe o mezusịrị nzube Chineke n'ọgbọ nke ya, ọ dara n'ụra, e wee lie ya n'ebe nna nna ya hà nọ, hụkwa ire ure, 37 ma onye ahụ Chineke mere ka ọ ghara ịhụ ire ure. 38 Ya mere, maranụ, ụmụnna m, na a na -ekwusara unu mgbaghara mmehie site na nwoke a, 39 na site na ya onye ọ bụla nke kwere nwere onwe ya pụọ ​​n'ihe niile nke iwu Mozis na -apụghị ịtọhapụ ya. 40 Ya mere, lezienụ anya ka ihe e kwuru n'akwụkwọ ndị amụma ghara ime: 41 “'Lee, unu ndị na -akwa emo, ka o ju unu anya ma laa n'iyi; n'ihi na ana m arụ ọrụ n'ụbọchị unu, ọrụ nke unu na -agaghị ekwere, ọ bụrụgodị na mmadụ agwa unu ya. '”
Ọrụ 13: 44-49, Ozi nke ndị mba ọzọ
44 N'ụbọchị izu ike sochirinụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ obodo ahụ niile gbakọtara ịnụ okwu Onyenwe anyị. 45 Ma mgbe ndị Juu hụrụ igwe mmadụ ahụ, ekworo juru ha obi wee malite imegide ihe Pọl kwuru, na -ekwujọ ya. 46 Ma Pọl na Banabas ji nkwuwa okwu kwuo, sị,Ọ dị mkpa ka eburu ụzọ gwa unu okwu Chineke. Ebe unu tụfuru ya wee kpee onwe unu ikpe na -erughị eru maka ndụ ebighi ebi, lee, anyị na -agakwuru ndị mba ọzọ. 47 N'ihi na otu a ka Jehova nyere anyị n'iwu, sị,Emere m gị ka ị bụrụ ìhè nye ndị mba ọzọ, ka i wee weta nzọpụta ruo nsọtụ ụwa'" 48 Mgbe ndị mba ọzọ nụrụ nke a, ha malitere ịicingụrị ọ andụ na inye okwu Onyenwe anyị otuto, ndị niile a họpụtara maka ndụ ebighi ebi wee kwere. 49 Okwu Onyenwe anyị wee gbasaa na mba ahụ dum.
Ọrụ 14: 13-15, Ịbara Ikpere arụsị mba
13 Onye nchụàjà Zeus, onye ụlọ nsọ ya dị n'ọnụ ụzọ obodo ahụ, wetara ehi na ihe ịchọ mma n'akụkụ ọnụ ụzọ ámá ma chọọ ịchụ àjà na ìgwè mmadụ ahụ. 14 Ma mgbe ndị ozi ahụ bụ Banabas na Pọl nụrụ ya, ha dọwara uwe ha ma banye n'ime igwe mmadụ, na -eti mkpu, 15 “Ndị ikom, gịnị mere unu ji eme ihe ndị a? Anyị bụkwa ụmụ nwoke, gị na ha, anyị na -ewetara gị ozi ọma, nke ahụ unu kwesịrị isi n'ihe efu ndị a chigharịkwuru Chineke dị ndụ, onye kere eluigwe na ụwa na oke osimiri na ihe niile dị n'ime ha..
Ọrụ 14: 19-22, Nkume a tụrụ Pọl
19 Ma ndị Juu si Antiọk na Aịkoniọm bịa, mgbe ha kwagidere igwe mmadụ ahụ, ha tụrụ Pọl nkume ma dọkpụrụ ya pụọ ​​n'obodo, na -eche na ọ nwụọla. 20 Ma mb whene ndi n disciplesso uzọ Jisus b gatheredara Onwe -ya, o bilie, ba n'obodo, n'echi -ya, Ya na Banabas we gaba na Derbe. 21 Mgbe ha kwusaara obodo ahụ ozi ọma ma mee ọtụtụ ndị na -eso ụzọ, ha laghachiri na Listra na Aịkoniọm na Antiọk, 22 na -ewusi mkpụrụ obi ndị na -eso ụzọ ike, na -agba ha ume ka ha nọgide n'okwukwe, na -asị na site na ọtụtụ mkpagbu, anyị ga -aba n'alaeze Chineke.
Ọrụ 15: 6-11, gbasara ibi úgwù nke ndị mba ọzọ
6 Ndịozi na ndị okenye zukọrọ ịtụle okwu a. 7 Ma mgbe arụrịta ụka dị ukwuu gasịrị, Pita biliri wee sị ha, “Ụmụnna m, unu maara na na mbụ, Chineke mere nhọrọ n'etiti unu, ka ndị mba ọzọ nụ site n'okwu m nke ozi ọma wee kwere. 8 Chineke, onye maara obi, gbakwara ha ama, site n'inye ha Mmụọ Nsọ dịka o nyekwara anyị. 9 o meghịkwa ka ọ dị iche n'etiti anyị na ha. ebe ha wereworo okwukwe mee ka obi ha dị ọcha. 10 Ya mere, ugbu a, gịnị mere ị na -anwale Chineke site n'itinye yoke n'olu ndị na -eso ụzọ nke nna anyị na anyị enweghị ike ịnagide?? 11 Mana anyị kwenyere na a ga -azọpụta anyị site na amara nke Onyenwe anyị Jizọs, dịkwa ka ha ga -azọpụta. "
Ọrụ 15: 12-21, Mkpebi nke kansụl
12 Nzukọ ahu nile we b silenta nkiti, we ge Barnabas na Pọl nti ka ha nākọ akukọ ihe -iriba -ama na ọlu -ebube nile Chineke mere site n'aka -ha n'etiti ndi mba ọzọ. 13 Mgbe ha kwuchara okwu, James zara, sị, “Ụmụnna m, geenụ m ntị. 14 Simeon kọrọ otú Chineke si buru ụzọ leta ndị mba ọzọ, isi n'etiti ha wepụtara aha ya otu ndị. 15 Ọ bu kwa nka ka okwu ndi -amuma kwekọrọ, dika edeworo ya n'akwukwọ nsọ, si, 16 “'Mgbe ihe ndị a gasịrị, m ga -alaghachi, m ga -ewughachikwa ụlọikwuu Devid nke daworo ada; M ga -ewughachi mkpọmkpọ ebe ya, m ga -eweghachikwa ya; 17 ka ndi fọduru nke madu we chọ Jehova, na ndị mba ọzọ niile a na -akpọ aha m, ka Onye -nwe kwuru, onye na -eme ihe ndị a 18 mara site na mgbe ochie. ' 19 Ya mere ikpe m bụ nke ahụ anyị ekwesịghị inye ndị mba ọzọ na -echigharịkwuru Chineke nsogbu, 20 kama ha kwesịrị idegara ha akwụkwọ ka ha zere ihe arụsị rụrụ arụ, na ịkwa iko, na ihe anyagburu anyagbu, na ọbara. 21 N'ihi na site n'ọgbọ ochie Moses nwere ndị na -ekwusa ya n'obodo niile, n'ihi na a na -agụ ya kwa ụbọchị izu ike n'ụlọ nzukọ. "
Ọrụ 15: 22-29, Akwụkwọ ozi nye ndị kwere ekwe ndị mba ọzọ
2 Mgbe ahụ ọ dị ndị ozi na ndị okenye mma, ya na nzukọ niile, ịhọpụta mmadụ n'etiti ha wee ziga ha na Pọl na Banabas Antiọk. Ha zigara Judas onye a na -akpọ Barsaba na Saịlas, ndị isi n'etiti ụmụnne. 23 ya na akwụkwọ ozi na -eso: “Ụmụnna, ma ndị ozi ma ndị okenye, na -ekele ụmụnna nke ndị Jentaịl nọ n'Antiọk na Siria na Silisia. 24 Ebe anyị nụrụ na ụfọdụ ndị mmadụ si n'ebe anyị nọ pụọ wee were okwu mebie gị, na -agbagha uche gị, n'agbanyeghị na anyị enyeghị ha iwu, 25 ọ dị anyị mma, ebe anyị ji otu obi bịa, ịhọpụta ndị nwoke wee zitere gị ha na ndị anyị hụrụ n'anya bụ Banabas na Pọl, 26 ndị ikom tinyere ndụ ha n'ihe ize ndụ maka aha Onyenwe anyị Jizọs Kraịst. 27 Ya mere ayi ezitewo Judas na Sailas, ndi ha onwe -ha g wordji ọnu gwa unu otù ihe ndia. 28 n'ihi na ọ dị anyị mma na Mmụọ Nsọ na anyị, ka anyị ghara ibokwasị unu ibu arọ karịa ihe ndị a: 29 ka unu zere ihe achụrụ n'àjà nye arụsị, na ọbara, na ihe nyagburu anyagbu, na ịkwa iko. Ọ bụrụ na unu edebe onwe unu na ihe ndị a, ọ ga -adịrị unu mma. Daalụ. ”
Ọrụ 16: 16-18, Na-achụpụ mmụọ mgbaasị
16 Ka anyị na-aga ebe a na-ekpe ekpere, otu nwanyị nke nwere mmụọ ịgba afa zutere anyị wee wetara ndị nwe ya nnukwu uru site n'ịgba afa. 17 Ọ soro Pọl na anyị, na -eti mkpu, sị, “Ndị a bụ ndị ohu nke Chineke Onye Kasị Elu, ndị na -ekwusara unu ụzọ nzọpụta.” 18 Nke a ka ọ nọkwa na -eme ruo ọtụtụ ụbọchị. Iwe were Pọl nke ukwuu, ọ tụgharịrị sị mmụọ ahụ, “Ana m enye gị iwu n'aha Jizọs Kraịst ịpụta n’ime ya. ” O we puta n'otù oge hour ahu.
Ọrụ 16: 25-34, Mgbanwe nke onye na-elekọta ụlọ mkpọrọ nke Filipaị
25 N'ihe dị ka n'etiti abalị, Pọl na Saịlas nọ na -ekpe ekpere na -abụku Chineke abụ, ndị mkpọrọ na -egekwa ha ntị, 26 na mberede, nnukwu ala ọma jijiji mere, ntọala ụlọ mkpọrọ ahụ wee maa jijiji. Na ozugbo ọnụ ụzọ niile meghere, agbụ onye ọ bụla atọpụghị. 27 Mgbe onye nche ụlọ mkpọrọ tetara wee hụ na ọnụ ụzọ ụlọ mkpọrọ ghere oghe, ọ mịpụtara mma agha ya ma chọọ igbu onwe ya, na -eche na ndị mkpọrọ agbapụla. 28 Ma Pọl tiri mkpu n'oké olu, "Emerụla onwe gị ahụ, n'ihi na anyị niile nọ ebe a." 29 Onye nche ụlọ mkpọrọ ahụ wee rịọ ka o nye ya ọkụ, o wee gbaba n'ime ya, na -atụ egwu, ọ dara n'ihu Pọl na Saịlas. 30 O we me ka ha puta, si, Ndi -nwe -ayi, gini ka m'g dome ka ewe zọputam? 31 Ha wee sị, "Kwere na Onyenwe anyị Jizọs, na ị ga -azọpụta, gị na ezinụlọ gị. " 32 Ha we gwa ya okwu, gwa kwa ndi nile nọ n'ulo -ya okwu Jehova. 33 O we kuru ha n'otù oge hour nke abali ahu sa ọnyá -ha; na e mere ya baptism ozugbo, ya na ndị ezinụlọ ya. 34 O wee kpọbata ha n'ụlọ ya wee debe nri n'ihu ha. Ya na ezinụlọ ya niile rejoụrịrị ọ thatụ na o kwere na Chineke.
Ọrụ 17: 1-3, Ikwusa ozi ọma na Tesalonaịka
Ọrụ 17: 22-31, Pọl nọ na Atens
22 Ya mere, Pọl guzoro n'etiti Ariopagọs, sị: “Ndị Atens, ahụrụ m na, n'ụzọ ọ bụla, unu nwere oke okpukpere chi. 23 N'ihi na mb͕e m'nāgabiga nēche ihe nile unu nēfè òfùfè, m'we hu-kwa-ra ebe-ichu-àjà nke ihe edeworo n'akwukwọ nsọ, si, Nye chi anāmaghi ama. Ya mere ihe unu nākpọ isi ala n'amaghi-ama, nka ka m'nēkwusa unu. 24 Chineke nke kere ụwa na ihe niile dị n'ime ya, ebe ọ bụ Onyenwe eluigwe na ụwa, anaghị ebi n'ụlọ nsọ mmadụ mere, 25 ọ bụghịkwa aka mmadụ na -ejere ya ozi, dị ka a ga -asị na ọ dị ihe ọ bụla, ebe ọ bụ na ya onwe ya na -enye mmadụ niile ndụ na ume na ihe niile. 26 O we site n'otu nwoke mee mba ọ bụla nke mmadụ ka ha biri n'elu ala niile, ebe o kpebiri oge oke na oke ebe obibi ha, 27 na ha ga -achọ Chineke, ma eleghị anya na -eche ụzọ ha n'ebe ọ nọ wee chọta ya. Ma ọ nọghị anya n'ebe onye ọ bụla n'ime anyị nọ, 28 maka "''N'ime ya ka anyị na -ebi, na -ejegharị, na -enwekwa ndụ anyị'; dị ka ọbụna ụfọdụ ndị na -ede uri gị kwuru, sị, 'N'ihi na anyị bụ ụmụ ya n'ezie.' 29 Ebe anyị bụ ụmụ Chineke, anyị ekwesịghị iche na chi dị ka ọla edo ma ọ bụ ọlaọcha ma ọ bụ okwute, ihe oyiyi nke nka na echiche mmadụ mere. 30 Chineke lefuru oge amaghị ama anya, mana ugbu a ọ na -enye mmadụ niile iwu ka ha chegharịa, 31 n'ihi na o wepụtala otu ụbọchị ọ ga -ekpe ụwa ikpe n'ezi omume site n'aka nwoke ọ họpụtara; na nke a ka o nyeworo mmadụ nile mmesi obi ike site na ịkpọlite ​​ya site na ndị nwụrụ anwụ. "
Ọrụ 18: 5-11, Pọl nọ na Kọrịnt
5 Mgbe Saịlas na Timoti si Masedonia bịa, Pọl nọ na -ekwusi okwu ike, na -agbara ndị Juu àmà na Kraịst bụ Jizọs. 6 Ma mgbe ha na -emegide ya ma na -ekwujọ ya, o fegharịrị uwe ya wee sị ha, “Ọbara unu dị n'isi unu! Aka m dị ọcha. Site ugbu a gaa n'ihu, aga m agakwuru ndị mba ọzọ. ” 7 O wee pụọ ebe ahụ gaa n'ụlọ otu nwoke aha ya bụ Titius Jọstọs, onye na -efe Chineke. Ụlọ ya dị nso n'ụlọ nzukọ. 8 Krispọs, onye na -achị ụlọ nzukọ, kwere na Onyenwe anyị, ya na ezinụlọ ya dum. Na ọtụtụ ndị Kọrint na -anụ Pọl kwere wee mee baptism. 9 Onye -nwe -ayi we si Pọl n'abali n'ọhù, Atula egwu, kama nọgide na -ekwu okwu, agbachikwala nkịtị. 10 n'ihi na m nọnyeere gị, ọ dịghịkwa onye ga -ebuso gị agha imerụ gị ahụ, n'ihi na enwere m ọtụtụ ndị n'obodo a bụ ndị m. ” 11 Ọ nọrọ otu afọ na ọnwa isii, na -ezi okwu Chineke n'etiti ha.
Ọrụ 18: 24-28, Apọlọs na Efesọs
24 Ma otu onye Juu aha ya bụ Apọlọs, onye obodo Aleksandria, bịara Efesọs. Ọ bụ nwoke nwere nkà, mara Akwụkwọ Nsọ nke ọma. 25 A kụziiri ya ụzọ nke Onyenwe anyị. Ebe ọ na -anụ ọkụ n'obi nke ukwuu, ọ na -ekwu ma na -akụzi ihe niile gbasara Jizọs, n'agbanyeghị na ọ maara naanị baptizim Jọn. 26 Ọ malitere ikwu okwu n'atụghị egwu n'ụlọ nzukọ, mana mgbe Prisila na Akwịla nụrụ ya, ha kpọpụrụ ya n'akụkụ wee kọwaara ya ụzọ Chineke nke ọma. 27 Mgbe ọ chọkwara ịgafe Akaya, ụmụnna gbara ya ume wee degara ndị na -eso ụzọ ya akwụkwọ ka ha nabata ya. Mgbe ọ bịarutere, o nyere ndị nyere aka nke ukwuu site na amara aka, 28 n'ihi na ọ katọrọ ndị Juu nke ọma n'ihu ọha, na -egosi site n'Akwụkwọ Nsọ na Kraịst bụ Jizọs.
Ọrụ 19: 1-10, Pọl nọ na Efesọs
1 O rue, mb Ape Apọlọs nọ na Kọrint, na Pọl gabigara n'etiti ime obodo, we bia Efesọs. N'ebe ahụ, ọ hụrụ ụfọdụ ndị na -eso ụzọ. 2 O wee sị ha, "Ị natara Mmụọ Nsọ mgbe ị kwere? ” Ha wee sị, "Ee e, anyị anụbeghị na mmụọ nsọ dị." 3 O we si, Gini kwa ka emere gi baptism? Ha kwuru sị, "N'ime baptizim Jọn." 4 Na Paulo kae sɛ:Jọn jiri baptism nke nchegharị mee baptism, na -agwa ndị mmadụ ka ha kwere n'onye na -abịa n'azụ ya, ya bụ, Jizọs. " 5 Mgbe ha nụrụ nke a, e mere ha baptizim n'aha Onyenwe anyị Jizọs. 6 Mgbe Pọl bikwasịrị ha aka ya abụọ, Mmụọ Nsọ bịakwasịrị ha, ha wee malite ikwu okwu n'asụsụ dị iche iche na ibu amụma.. 8 Ọ banyere n'ụlọ nzukọ wee kwuo okwu ọnwa atọ n'atụghị egwu, na -atụgharị uche ma na -eme ka ha kwenye alaeze Chineke. 9 Ma mgbe ụfọdụ ndị isi ike wee nọgide na ekweghị ekwe, na -ekwujọ ya ụzọ ahụ n'ihu ọgbakọ, ọ hapụrụ ha wee kpọrọ ndị na -eso ụzọ ya, na -atụgharị uche kwa ụbọchị n'ụlọ nzukọ Tiranọs. 10 Nke a gara n'ihu ruo afọ abụọ, nke mere na ndị niile bi n'Eshia nụrụ okwu Onyenwe anyị, ma ndị Juu ma ndị Grik.
Ọrụ 20: 17-35, okwu ikpeazụ Pọl gwara ndị okenye Efesọs
17 Ma mb frome o si na Militọs ziga n'Efesọs, kpọ ndi -okenye nke nzukọ Kraist ka ha biakute ya. 18 Ma mgbe ha bịakwutere ya, ọ sịrị ha: “Unu onwe unu maara otú m si bi n'etiti unu ụbọchị niile site n'ụbọchị mbụ m bidoro ụkwụ na Eshia, 19 na -ejere Onyenwe anyị ozi site n'ịdị umeala n'obi niile na anya mmiri na ọnwụnwa ndị mere m site na nkata ndị Juu; 20 otú m si alaghị azụ n'ịgwa unu ihe ọ bụla bara uru, na ịkụziri unu ihe n'ihu ọha nakwa site n'ụlọ ruo n'ụlọ, 21 na -agbara ma ndị Juu ma ndị Grik àmà nchegharị n'ebe Chineke nọ na okwukwe n'ime Onyenwe anyị Jizọs Kraịst. 22 Ma ub ,u a, le, mu onwem nāga Jerusalem, nke Mọ Nsọ nyerem ike, amataghi ihe g happenmem n'ebe ahu, 23 ewezuga na Mmụọ Nsọ na -agbara m ama n'obodo niile na mkpọrọ na mkpagbu na -echere m. 24 Ma ejighị m ndụ m kpọrọ ihe ma ọ bụ dị oke ọnụ ahịa nye onwe m, ọ bụrụ na m ga -agbacha ọsọ m na ozi m natara n'aka Onyenwe anyị Jizọs, ịgba ama maka ozi -ọma nke amara Chineke. 25 Ma ugbua, lee, a matara m na onweghị onye n'ime unu nke m jegharịrịworo na -ekwusa alaeze ga -ahụkwa ihu m ọzọ. 26 Ya mere a na m agba ama nye gị taa na aka m dị ọcha na ọbara mmadụ niile, 27 n’ihi na alaghị m azụ n’ikwusara unu ndụmọdụ niile nke Chineke. 28 Lezienu onwe -unu na ìgwè aturu anya nke -ọma, nke Mọ Nsọ mere unu ndi nlekọta nime ya, ilekọta nzukọ Chineke. nke o jiri ọbara nke ya nweta (ọbara nke ya). 29 Amaara m na mgbe m ga -apụ, anụ ọhịa wolf dị egwu ga -abata n'etiti unu, ghara imere ìgwè atụrụ ahụ ebere; 30 ndị si n’etiti onwe unu ga-ebili, ndị na-ekwu ihe gbagọrọ agbagọ, iji dọrọ ndị na-eso ụzọ Jizọs ka ha sowe ha. 31 Ya mere mụrụ anya, na -echeta na ruo afọ atọ, akwụsịghị m abalị ma ọ bụ ehihie iji anya mmiri na -adụ onye ọ bụla ọdụ. 32 Ma ugbua a na m enyefe unu nye Chineke na okwu amara ya, nke nwere ike iwuli gị elu na inye gị ihe nketa n'etiti ndị niile e doro nsọ. 33 Ọ dịghị onye m nwere anyaukwu maka ọlaọcha ma ọ bụ ọlaedo ma ọ bụ uwe ya. 34 Unu onwe unu maara na aka ndị a gboro mkpa m na ndị mụ na ha nọ. 35 N'ihe niile, egosiri m gị na site n'ịrụsi ọrụ ike n'ụzọ dị otu a, anyị ga -enyere ndị na -adịghị ike aka ma cheta okwu Onyenwe anyị Jizọs, otu o siri kwuo, 'Ọ dị ngọzi inye karịa ịnata'"
* Ọtụtụ nsụgharị, gụnyere ESV, tụgharịrị Ọrụ 20:28. Ihe odide mbụ nke Alexandria na Critical Greek Text (NA-28) gụrụ, “Ụka nke Chineke, nke o jiri ọbara nke ya zụta.” Mgbe e mesịrị, ihe odide Byzantine gụrụ, "Ụka nke Onyenwe anyị na Chineke, nke o ji ọbara nke ya zụta." N'okpuru bụ ntụgharị COM (Comprehensive New Testament) nke amaokwu a dabere na ederede dị oke mkpa na -egosipụta ihe odide Greek mbụ.
Ọrụ 20:28 (COM), Ntụgharị asụsụ dabere n'ihe odide mbụ
28 Lezienụ onwe unu na ìgwè atụrụ niile anya, nke Mmụọ Nsọ mere unu ndị nlekọta n'etiti ya, ka unu na -azụ atụrụ Chineke ụka nke Chineke nke o ji ọbara nke ya nweta.
Ọrụ 22: 6-16, na-akọ akụkọ nchegharị ya
6 “Ka m nọ na -aga ma na -abịaru Damaskọs nso, n'ihe dị ka n'etiti ehihie, nnukwu ọkụ sitere n'eluigwe nwuo na mberede gburugburu m. 7 M wee daa n'ala ma nụ olu na -asị m, 'Sọl, Sọl, gịnị mere ị na -akpagbu m?' 8 M'we za, si, Ì bu onye, ​​Onye -nwe -ayi? O wee sị m, 'Abụ m Jizọs onye Nazaret, onye ị na -akpagbu. ' 9 Ugbu a ndị mụ na ha nọ hụrụ ìhè ahụ mana ha aghọtaghị olu onye na -agwa m okwu. 10 M'we si, Gini ka m'gēme, Onye-nwe-ayi? Jehova we sim, Bilie, ba na Damaskọs, agēgosi kwa gi n'ebe ahu ihe nile nke akaraworo ka i me. 11 Ebe m na -apụghị ịhụ ụzọ n'ihi nchapụta nke ìhè ahụ, ndị mụ na ha nọ na -edu m wee bata na Damaskọs. 12 “Otu Ananaịas, onye na -asọpụrụ Chineke dịka iwu si kwuo, ndị Juu niile bi ebe ahụ kwuru okwu ọma, 13 bịakwutere m, guzo n'akụkụ m wee sị m, 'nwanne Sọl, hụ ụzọ.' N’oge awa ahụ wee hụ ụzọ, ahụkwara m ya. 14 Ọ si, 'Chineke nke nna nna anyị hà họpụtara gị ka ị mata uche ya, ịhụ Onye ezi omume na ịnụ olu n'ọnụ ya; 15 n'ihi na ị ga -abụ onye àmà ya nye ihe niile nke ị hụworo ma nụ. 16 Ma ugbua gịnị mere i ji chere? Bilie, mee baptism, sachapụkwa mmehie gị niile, na -akpọku aha ya. '
Ọrụ 23: 6-10, Pọl n'ihu kansụl
6 Ma mgbe Pọl matara na akụkụ ya bụ ndị Sadusii, akụkụ nke ọzọ bụ ndị Farisii, o tiri mkpu na nnọkọ ikpe, “Ụmụnna m, abụ m onye Farisii, nwa onye Farisii. Ọ bụ maka olileanya na mbilite n'ọnwụ nke ndị nwụrụ anwụ na a na -ekpe m ikpe. ” 7 Mb whene o kwusiri nka, esemokwu putara n'etiti ndi -Farisi na ndi -Sadusi, ewe kewa nzukọ ahu. 8 N'ihi na ndị Sadusii na -asị na mbilite n'ọnwụ adịghị, mmụọ ozi adịghị, mmụọ adịghị, mana ndị Farisii na -amata ha niile. 9 Oké ụzụ wee daa, ụfọdụ ndị odeakwụkwọ nọ n'òtù ndị Farisii biliri wee malite ịrụrịta ụka nke ukwuu, sị: “Anyị ahụghị ihe ọjọọ dị n'ime nwoke a. Gịnị ma ọ bụrụ na mmụọ ma ọ bụ mmụọ ozi agwa ya okwu? ” 10 Ma mgbe nkewa ahụ siri ike, ọchịagha ahụ tụrụ egwu na ha ga -adọka Pọl, o nyere ndị agha iwu ka ha gbadaa were ike wepụ ya n'etiti ha ma kpọba ya n'ogige ndị agha.
Ọrụ 24: 14-21, Pọl n'ihu Filiks
14 Mana nke a ka m na -ekwupụtara gị, na dịka ụzọ ahụ, nke ha na -akpọ ịrọ òtù, Ana m efe Chineke nke nna nna anyị hà, na -ekwere ihe niile iwu kwuru na ihe e dere n'akwụkwọ ndị amụma, 15 nwere olile anya na Chineke, nke ndị a n'onwe ha nabatara, na a ga -enwe mbilite n'ọnwụ nke ma ndị ezi -omume ma ndị ajọọ -omume. 16 Ya mere, ọ na -ewute m mgbe niile inwe ezi akọnuche n'ebe Chineke na mmadụ nọ. 17 Ugbu a mgbe ọtụtụ afọ gasịrị, abịara m wetara mba m onyinye ebere na onyinye. 18 Ka m nọ na -eme nke a, ha hụrụ m ka m na -eme onwe m ka m dị ọcha nʼụlọnsọ ukwu, na -enweghị igwe mmadụ ma ọ bụ ọgba aghara. Mana ụfọdụ ndị Juu si Eshia- 19 ha kwesịrị ịnọ ebe a n'ihu gị ma boo m ebubo, ọ bụrụ na ha nwere ihe ọ bụla megide m. 20 Ma ọ bụ, ka ndị a n'onwe ha kwuo ihe ọjọọ ha hụrụ mgbe m guzoro n'ihu kansụl, 21 ewezuga otu ihe a nke m tiri mkpu mgbe m guzo n'etiti ha: 'Ọ bụ maka mbilite n'ọnwụ nke ndị nwụrụ anwụ na a na -ekpe m ikpe n'ihu gị taa. '”
Ọrụ 26: 4-8, Nchebe Pọl
4 Ndị Juu niile maara ụzọ ndụ m site na nwata, site na mmalite n'etiti mba m na Jerusalem. 5 Ha maara ogologo oge, ma ọ bụrụ na ha dị njikere ịgba akaebe, na dịka m siri dị, otu anyị siri dị ka onye Farisii. 6 Ma ugbu a, m na -eguzo ebe a maka ikpe n'ihi olile -anya m nwere na nkwa nke Chineke kwere nna anyị ha, 7 nke ebo iri na abụọ anyị na -atụ anya inweta, ebe ha na -efe ofufe abalị na ehihie. Ọ bụ maka olileanya a ka ndị Juu na -ebo m ebubo, eze! 8 Gịnị mere onye ọ bụla n'ime unu ji chee na ọ dị ịtụnanya na Chineke na -akpọlite ​​ndị nwụrụ anwụ?
Ọrụ 26: 12-23, Akaebe Pọl banyere ntọghata ya
12 "Banyere nke a, agara m Damaskọs na ikike na ọrụ nke ndị isi nchụàjà. 13 N'etiti ehihie, eze, ahụrụ m n'ụzọ ka ìhè si n'eluigwe, na -enwu karịa anyanwụ, na -enwu gburugburu m na ndị mụ na ha so. 14 Mgbe anyị niile dakwara n'ala, anụrụ m olu na -asị m n'asụsụ Hibru, 'Sọl, Sọl, gịnị mere ị na -akpagbu m? Ọ na -esiri gị ike ịgba ndụdụ e ji achị anụ ụkwụ. ' 15 M'we si, Ì bu onye, ​​Onye -nwe -ayi? Onyenwe anyị wee sị, 'Abụ m Jizọs onye ị na -akpagbu. 16 Ma bilie guzoro n'ụkwụ gị, n'ihi na emeghere m gị anya maka nke a, ịhọpụta gị ka ị bụrụ odibo na onye akaebe maka ihe ị hụworo m na ndị m ga -apụta n'ihu gị, 17 na -anapụta gị n'aka ndị gị nakwa n'aka ndị mba ọzọ — onye m na -eziga gị 18 ka ha meghee anya ha, ka ha wee si n'ọchịchịrị tụgharịa banye n'ìhè na site n'ike Setan chigharịkwuru Chineke, ka ha wee nata mgbaghara mmehie na ebe n'etiti ndị e doro nsọ site n'okwukwe n'ime m.. ' 19 Ya mere, Eze Agripa, anaghị m enupụ isi n'ọhụ nke eluigwe, 20 ma buru ụzọ kwusaara ndị nọ na Damaskọs, mgbe ahụ na Jerusalem na mpaghara Judia niile, nakwa ndị mba ọzọ, ka ha chegharịa wee chigharịkwuru Chineke, na -eme ihe omume na nchegharị ha. 21 N'ihi nke a ndị Juu jidere m n'ụlọ nsọ wee chọọ igbu m. 22 Ruo taa, enwere m enyemaka nke sitere na Chineke, ya mere m ji guzo ebe a na -agbara ma onye nta ma onye ukwu àmà, na -ekwu ihe ọ bụla ma ọ bụghị ihe ndị amụma na Mozis kwuru ga -eme. 23 na Kraist aghaghi ihu ahuhu, na, site n'ịbụ onye mbụ si na ndị nwụrụ anwụ bilie, ọ ga -ekwusara ma ndị anyị ma ndị mba ọzọ ìhè. "
Ọrụ 27: 23-26, Ọdịdị nke mmụọ ozi tupu ụgbọ mmiri ekpuo
23 N'ihi n'abalị a, otu mmụọ ozi nke Jehova guzoro n'ihu m na Chineke onye m bụ na onye m na -efe, 24 o wee sị, 'Atụla egwu, Pọl; ị ghaghị iguzo n'ihu Siza. Ma, lee, Chineke enyela gị ndị niile gị na ha na -eso ụgbọ mmiri. ' 25 Ya mere, nwee obi ike, n'ihi na enwere m okwukwe na Chineke na ọ ga -adị kpọmkwem dịka a gwara m. 26 Mana anyị ga -agharịrị n'agwaetiti ụfọdụ. "
Ọrụ 28: 7-10, Paul na agwaetiti Malta
7 Ma n'ókèala ebe ahụ, e nwere ala nke onyeisi agwaetiti ahụ, aha ya bụ Publius, onye nabatara anyị wee nabata anyị nke ọma ruo ụbọchị atọ. 8 O wee ruo na nna Pọbliọs dina ọrịa ọkụ na ọnyụnyụ ọbara. Pọl letakwara ya na kpere ekpere, bikwasị ya aka n'isi, gwọọ ya. 9 Ma mgbe nke a mere, ndị ọzọ nọ n'agwaetiti ahụ, ndị nwere ọrịa, bịakwara gwọọ ha. 10 Ha kwanyekwara anyị ugwu nke ukwuu, mgbe anyị chọrọ ịkwọ ụgbọ mmiri, ha na -etinye ihe ọ bụla dị anyị mkpa n'ụgbọ.
Ọrụ 28: 23-31, ozi ikpeazụ nke Pọl
23 Mgbe ha debeere ya otu ụbọchị, ha bịakwutere ya n'ebe obibi ya n'ọnụ ọgụgụ ka ukwuu. Site n'ụtụtụ ruo anyasị ọ kọwaara ha, na -agba ama ala -eze Chineke ma na -agbalị ime ka ha kwenye Jizọs sitere na Iwu Mozis na nke ndị amụma. 24 Ufọdu we kwenye n'okwu -ya; ma ndi ọzọ ekweghi. 25 Ma n'arụrịta ụka n'etiti onwe ha, ha hapụrụ mgbe Pọl kwuchara otu okwu: “Mmụọ Nsọ ziri ezi n'ịgwa nna nna unu okwu site n'ọnụ Aịzaịa onye amụma: 26 “'Gakwuru ndị a, sị,' Ị ga -anụ mana ị gaghị aghọta, ị ga -ahụkwa mana ị gaghị aghọta. ' 27 N'ihi na obi ndị mmadụ a agwụla, na ntị ha ka ha ji enwe ike ịnụ ihe, ha emechiwokwa anya ha; ka ha ghara iji anya ha hụ, werekwa ntị ha nụrụ, werekwa obi ha ghọta ma tụgharịa, m wee gwọọ ha. 28 Ya mere, mara nke a nzoputa a nke Chineke ka ezigara ndị mba ọzọ; ha ga -ege ntị. ” 30 Ọ nọrọ ebe ahụ afọ abụọ zuru oke site na ego ya, wee nabata ndị niile bịakwutere ya, 31 na -ekwusa alaeze Chineke na nkuzi banyere Onyenwe anyị Jizọs Kraịst jiri nkwuwa okwu niile na enweghị mgbochi.